Xarummaha dar yeelka caafimaadka ee Pub oo sawaxan ka soo yeeray - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Lillemor Strömberg/SR.
Xarummaha dar yeelka caafimaadka ee Pub oo sawaxan ka soo yeeray
La cusbooneeyay torsdag 28 februari 2013 kl 14.32
La daabacay torsdag 28 februari 2013 kl 09.52
Tirada goobaha dar-yeelka caafimaadka maskaxda ee dhallaanka oo gacanta loo gelineyo shirkadaha madaxa bannaan ayaa kor u sii kacaya, iyada oo badankood goobahaasi ey mulki u yeelanayso shirkadda lagu magacaabo Prima.
Shirkaddan ee soo ban-dhigeeysa hab-dar-yeel ee caafimaad oo cusub ayaa ku guuleeysanaysa badankood tartanka qandaraaska goobahaasi iyadoona dhanka kale ey soo ban-dhigeeysa qandaraaska qiimaha ugu jaban, sidaa daraadeedna ku hantiyaysa qandaraasyada.
Dhanka shaqaalaha goobaha dar-yeelka caafimaad ayaa ka qaba welwel iyo inay hoos u dhacdo tayada dar-yeelka dhallaanka ey la soo gudboonaadaan caqwabad-bulshadeedku, maadaama aaney shirkaddu macaash ballaaran ka heleyn.
Xilliga dayrta ayay shirkadda Prima la wareegi doontaa gacan ku haynta goobta dar-yeelka caafimaadka, maskaxda ee dhallaanka Pub ee nawaaxiga Järva iyo Botkyrka, halkaasi oo uu ka howl-galo Staffan Lundberg oo ah dhakhtar dhanka culuunta maskaxda:
- Waa wax laga murugoodo in ey helaan tayo ka liidata ee dar-yeel caafimaad, dhallaanka ey la soo gudboonaadaan caqabad-bulshadeedku, isla-markaana ey ka soo gaaraan wax-yeelooyin saameeyn ballaaran ku yeesha. Iyo in aan loo arag in macaash aan lagu heleyn haddii dar-yeelkooda laga shaqeeyo, sida uu sheegay.
Dhanka kale saraakiisha goobahaa ka howl-gasha ayaa ka muujiyey welwel ey ka qabaan xaaladda tayo ee goobaha Pub ee nawaaxiga Järva iyo Botkyrka. Shirkadda Prima waxey leedahay dhakhaatiir badan, hase yeeshee aad ayay u dhimi doontaa, saddex-daloolow mid ee nawaaxiga Botkyrka. Waa saraakiisha culuunta bulshada halka wax laga dhimi doono iyo aragtida arrimmaha bulshada kuwa meesha ka bixi doona. Sidoo kale waxaa jira tuhun ballaaran ee laga qabo in dhaqaaluhu yahay midka hoggaamin doona hoowlaha, sida ay sheegtay Elisabeth Djärf oo ka howl-gasha goobta daryeelka Pub ee nawaaxiga Järva:
- Booqashooyinka bukaanka ayaa ah halka dhaqaalaha laga heleyo. Kolka haddaba la dooneyo in dardar-gelin lagu sameeyo hoowlaha waa in la raacaa hadba dhanka faa'iidadu ku jirto.